Mak 5 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
5 Ha wee rute n’ofe nke ọzọ nke oké osimiri ahụ n’ime obodo ndị Gerasa.+ 2 Ozugbo ọ pụtara n’ụgbọ mmiri ahụ, otu nwoke nke mmụọ na-adịghị ọcha ji si n’ebe e nwere ili ncheta zute ya.+ 3 O bi n’ebe a na-eli ozu; tupu mgbe ahụ, ọ dịtụbeghị onye nwere ike iji ọbụna agbụ ígwè kesie ya ike, 4 n’ihi na a tụwo ya ị́gà, keekwa ya agbụ ígwè ugboro ugboro, ma ọ dọbiri agbụ ígwè ndị ahụ, gbajiekwa ị́gà ndị ahụ; ọ dịghịkwa onye nwere ike ijide ya. 5 Ọ na-eti mkpu mgbe niile, abalị na ehihie, n’ebe a na-eli ozu nakwa n’ugwu, jirikwa nkume na-ebekasị onwe ya ahụ́. 6 Ma mgbe ọ nọ n’ebe dị anya hụ Jizọs, ọ gbaara ọsọ gaa kpọọrọ ya isiala, 7 mgbe o tiri mkpu n’oké olu,+ ọ sịrị: “Jizọs, Ọkpara nke Chineke Onye Kasị Elu,+ gịnị jikọrọ mụ na gị? Jiri Chineke ṅụọrọ m iyi+ na ị gaghị emekpa m ahụ́.”+ 8 N’ihi na ọ nọ na-asị ya: “Gị mmụọ na-adịghị ọcha, si n’ime nwoke a pụta.”+ 9 Ma ọ malitere ịjụ ya, sị: “Gịnị bụ aha gị?” O wee sị ya: “Aha m bụ Ụsụụ,+ n’ihi na anyị dị ọtụtụ.”+ 10 O wee rịọsie ya arịrịọ ike ọtụtụ ugboro ka ọ ghara izipụ ndị mmụọ ahụ n’obodo ahụ.+ 11 Ma oké ìgwè ézì+ nọ n’ugwu dị n’ebe ahụ na-ata nri.+ 12 Ya mere, ha rịọsiri ya arịrịọ ike, sị: “Ziga anyị n’ime ìgwè ézì ndị a, ka anyị banye n’ime ha.” 13 O wee sị ha gawa. Ya mere, ndị mmụọ ahụ na-adịghị ọcha pụtara wee banye n’ime ézì ndị ahụ; ìgwè ézì ahụ nuuru gaa n’ebe kpọdara akpọda wee daba n’oké osimiri. Ha dị ihe dị ka puku abụọ, oké osimiri wee rie ha n’otu n’otu.+ 14 Ma ndị na-azụ ha gbara ọsọ. Ha kọkwara ihe merenụ n’ime obodo nakwa n’ime ime obodo; ndị mmadụ wee bịa ka ha hụ ihe ahụ merenụ.+ 15 Ha wee bịakwute Jizọs, ha hụkwara onye ahụ mmụọ ọjọọ ji, bụ́ nwoke a nke nweburu ụsụụ ndị mmụọ ahụ, ka o yi uwe ma nọrọ ọdụ, uche zukwara ya okè, egwu wee tụọ ha. 16 Ndị hụrụ ya kọkwaara ha otú ihe a si mee nwoke ahụ mmụọ ọjọọ ji, kọọkwa banyere ézì ndị ahụ. 17 Ha wee malite ịrịọsi ya arịrịọ ike ka ọ pụọ n’ógbè ha.+ 18 Ka ọ na-abanye n’ụgbọ mmiri, nwoke ahụ mmụọ ọjọọ jibu malitere ịrịọsi ya arịrịọ ike ka ya na ya nọrọ.+ 19 Otú ọ dị, o kweghị ya, kama ọ sịrị ya: “Lakwuru ndị ikwu gị,+ kọọkwara ha ihe niile Jehova+ meere gị nakwa ebere+ o meere gị.” 20 O wee pụọ malite ịkọsa n’ime Dikapọlis+ ihe niile Jizọs meere ya, o wee malite iju mmadụ niile anya.+ 21 Mgbe Jizọs ji ụgbọ gafere ọzọ n’ikpere mmiri dị n’ofe nke ọzọ, oké ìgwè mmadụ zukọtara n’ebe ọ nọ; ọ nọkwa n’akụkụ oké osimiri ahụ.+ 22 Otu n’ime ndị isi oche nke ụlọ nzukọ, onye aha ya bụ Jeirọs, bịara, mgbe ọ hụrụ ya, ọ dakwara n’ala n’ụkwụ ya+ 23 ma rịọsie ya arịrịọ ike ọtụtụ ugboro, sị: “Obere nwa m nwaanyị nọ n’ọnọdụ dị oké njọ. Biko, bịa bikwasị ya aka+ ka o wee gbakee ma dị ndụ.”+ 24 O wee soro ya gawa. Oké ìgwè mmadụ sokwa ya ma na-adagide ya.+ 25 E nwere otu nwaanyị nke na-arịa ọrịa oruru ọbara+ kemgbe afọ iri na abụọ,+ 26 ọ tawo ahụhụ nke ukwu n’aka ọtụtụ ndị ọgwọ ọrịa,+ o mefuwokwa ihe niile o nwere, ma o nwebeghị nke baara ya uru, kama nke ahụ, ọ kara njọ. 27 Mgbe ọ nụrụ ihe banyere Jizọs, o si n’ìgwè mmadụ ahụ bịa n’azụ ya wee bitụ uwe elu ya aka;+ 28 n’ihi na ọ nọ na-ekwu, sị: “Ọ bụrụ na m bitụ naanị uwe elu ya aka, m ga-agbake.”+ 29 Oruru ọbara ya kwụsịrị ozugbo, o wee mata na a gwọwo ya ọrịa ọjọọ ahụ.+ 30 Ozugbo ahụ, Jizọs matara n’ime onwe ya na ike+ apụwo ya n’ahụ́, o wee tụgharịa n’etiti ìgwè mmadụ ahụ, malite ịjụ, sị: “Ònye bitụrụ uwe elu m aka?”+ 31 Ma ndị na-eso ụzọ ya malitere ịsị ya: “Ị na-ahụ ka ìgwè mmadụ na-adagide gị,+ gị ana-ajụ, ‘Ònye bitụrụ m aka?’” 32 Otú ọ dị, ọ nọ na-ele anya gburugburu ka ọ hụ nwaanyị mere ihe a. 33 Ma ebe nwaanyị ahụ maara ihe mere ya, ọ tụrụ ụjọ, marakwa jijiji bịa daa n’ala n’ihu ya wee gwa ya eziokwu niile.+ 34 Ọ sịrị ya: “Nwa m nwaanyị, okwukwe gị emewo ka ahụ́ dị gị mma. Laa n’udo,+ gbakee n’ọrịa ọjọọ nke na-arịa gị.”+ 35 Mgbe ọ ka nọ na-ekwu okwu, ndị ikom ụfọdụ ndị si n’ụlọ onyeisi oche ụlọ nzukọ bịara, sị: “Nwa gị nwaanyị anwụọla! Gịnị mere ị ka ji na-enye onye ozizi nsogbu?”+ 36 Ma mgbe Jizọs nụpeere ihe ha na-ekwu, ọ sịrị onyeisi oche nke ụlọ nzukọ: “Atụla egwu, naanị nwee okwukwe.”+ 37 O kweghịkwa ka onye ọ bụla soro ya ma e wezụga Pita na Jems na Jọn nwanne Jems.+ 38 Ha wee bịa n’ụlọ onyeisi oche ụlọ nzukọ, o wee hụ ọgba aghara dị n’ebe ahụ, hụkwa ndị na-akwa ákwá ma na-eti mkpu arịrị dị ukwuu. 39 Ozugbo ọ batara, ọ sịrị ha: “N’ihi gịnị ka unu ji na-akpata ọgba aghara ma na-akwa ákwá? Nwatakịrị ahụ anwụbeghị, kama ọ na-ehi ụra.”+ 40 Ha wee malite ịchị ya ọchị, na-akwa ya emo. Ma, mgbe ọ chụpụrụ ha niile, ọ kpọọrọ nna na nne nwatakịrị ahụ na ndị ha na ya so, ha wee banye n’ebe nwatakịrị ahụ tọgbọ.+ 41 O seere nwatakịrị ahụ n’aka, sị ya: “Talita kumi,” nke pụtara, ma a sụgharịa ya: “Nwata nwaanyị, ana m asị gị, Bilie!”+ 42 Nwata nwaanyị ahụ biliri ozugbo wee malite ije ije, n’ihi na ọ dị afọ iri na abụọ. Ozugbo ahụ, ha nwere oké obi ụtọ.+ 43 Ma o nyere ha iwu ugboro ugboro ka ha ghara ikwe ka onye ọ bụla nụ+ ihe a, o kwukwara ka e nye nwata nwaanyị ahụ ihe ka o rie.